निगममा रणनीतिक साझेदारको विकल्प छल्न सेयर बिक्रीको निर्णय ! « GDP Nepal
( Saturday, March 28, 2020)
Published On : 24 February, 2020 8:13 am
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको आइतबारको सञ्चालक समिति वैठकले २५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने निर्णय ग¥यो । निगमको यो निर्णय सरोकारवालाहरुका लागि अनपेक्षित त थियो नै सँगसँगै यसले निगमको सुधार हुनसक्ने अवस्था पनि छैन ।
निगमलाई आवश्यक पुँजी सरकारले नदिएपछि सेयर बिक्रीको उपाय खोजिएको प्रष्ट छ । तर, सरकारको ७५ प्रतिशत स्वामित्व रहने कम्पनीमा न निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ न कुनै वाह्य लगानीकर्ताले नै रुचि राख्छन् । सरकार र निजी क्षेत्रले बराबरी हिस्सा राखेमात्र निगममा अन्य लगानीकर्ताले चासो राख्न सक्छन् ।
अर्कोतर्फ निगमका लागि अहिले आवश्यक भनेको रणनीतिक साझेदार नै हो, जुन सेयर बिक्रीबाट सम्भव छैन । सेयर बिक्री प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने भएकाले उड्डयन क्षेत्रका विश्वप्रसिद्ध विदेशी कम्पनीले यसमा भाग लिने सम्भवना देखिँदैन ।
यसरी निगमको व्यवस्थापन करारमा दिने वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने उपयुक्त विकल्प छल्न नै सेयर बिक्रीको प्रस्ताव ल्याइनु निगमलाई थप धरासायी बनाउने खेल हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । यसबाट निगमको स्वामित्व यतिजस्तै सरकार संरक्षित कम्पनीको हातमा जाने र निजी कम्पनीको स्वार्थमा निगम उपयोग हुनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
निगाका अनुसार सेयर बिक्रीका लागि आइतबारको सञ्चालक समितिको बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो । सञ्चालक समितिका सदस्य अच्युतराज पहाडीका अनुसार समितिले ७५ प्रतिशत सरकार आफैंले राखी बाँकी २५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
निर्णयअनुसार २२ प्रतिशत सरकारी संस्थालाई र तीन प्रतिशत सेयर कर्मचारीलाई दिइनेछ । यो निर्णय पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नेछ । उनका अनुसार अब निगमको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि डीडीए गरिनेछ र त्यस अनुसारले २५ प्रतिशत बराबरको रकम सेयरमार्फत् बिक्री गरिनेछ ।
निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले राजीनामा दिएपछि सञ्चालक समिति अध्यक्षता पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सम्हालिरहेका छन् । अधिकारी अध्यक्ष भइसकेपछि निगमको सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
अमेरिकामा २० खर्ब डलरको आर्थिक प्याकेजः अरु मुलुकमा पनि घोषणा, नेपालमा कहिले ?
काठमाडौं । अमेरिकाले कोरोना भाइरसको क्षतिबाट अर्थतन्त्र र आफ्ना नागरिकको पुनस्र्थापनाका लागि २० खर्ब डलर
कोरोनाका कारण ३३ लाख लाख अमेरिकीले जागिर गुमाए, बेरोजगार भत्ताको दाबी
वासिङ्टन (एजेन्सी)ः कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकट अमेरिकामा पर्ने देखिएको छ ।
चौधरी फाउन्डेसनद्वारा ३३ स्वास्थ्य केन्द्रमा पीपीई वितरण
काठमाडौं । चौधरी फाउन्डेसनले प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) को
कांग्रेसले भन्योः मजदुरलाई भत्ता र साना व्यवसायीलाई तीन महिनाको ब्याज मिनाहा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लकडाउनबाट रोजिरोटी गुमाएका मजदुरलाई दैनिक निर्वाह भत्ता दिन तथा